आफ्नै श्रीमान् ले यस्तो अवस्था बनाइएकी पुजाले खालिन् सुन्नै नसकिने हृदय विदारक घटना, एस्ता अपराधी मानिसलाई के सजाए दिने ? (भिडियो हेर्नुस्) - Babal Khabar
धादिङमा श्रीमान् ले नै यस्तो अवस्था बनाएकी पुजा परियार अहिले मिडियामा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने भएकी छन् । उनले टेलिफोनमा भनेका कुराहरु सुनेर एउटा श्रीमान्ले श्रीमतिलाई यतिसम्म पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
मलाई छोराको लागि बाँच्न दिनु भनेर बारम्बार बिलौना गरें तर मेरो कुराकानी कसैले सुनेन । उनले अस्पतालको शैयावाट भनेकी छन्, मलाई सासुले पनि यस्तै गर्नुभएको थियो । तर त्यतीबेला म बाँचे । त्यो दिन पनि सासु बचाएको भए मलाई यस्तो घटना हुने थिएन । श्रीमान् ले ढोका लगाएर ते ल त’ता’एर शरिरमा हा’ल्दा समेत सासुले बचाउन पनि नआएको पुजाले बताएकी छन् । श्रीमान् ले बारम्बार त्यस्तो गर्दा पनि सासुले कहिल्यै सहयोग नगरेको पुजाको भनाई छ । काठमाडौमा श्रीमान्ले एक महिना जागिर गर्दा पनि भिडियो कल गरेर आफ्नो अं ग देखाइदे भनेर दवाव समेत दिने गरेको पनि पुजाले बताएकी छन् । *** यो समाचार पुरा हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
आमाबुवा र दाजुभाईको अगाडी पनि फोन गर्दा पनि श्रीमान्ले त्यस्तै आग्रह गर्दा आफुले त्यो पुरा गर्न नसकेको उनको भनाई छ । श्रीमान् को आग्रहमै बनाएको भिडियो पनि लाज लागेर आफुले पठाउन नसकेर डिलिट समेत गरेको भएपनि सासुले कसरी त्यो भिडियो देख्नुभयो आफुले थाहा नपाएको बताउँछिन् । सासुकै अगाडी श्रीमान् ले ता तो ते’ल हा’ल्छु भनेर कोठामा लगेर ढोका लगाउँदा पनि सासु बचाउन नआएको पुजाको भनाई छ । उनले आफु माथि भएको घटना सबै सुनाएकी छन् ।
जुन कुरा हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । कोही मानिस आफ्नै श्रीमति माथि यति क्र र कसरी हुनसक्छ ? कल्पना पनि गर्न सकिन्न । आमाबुवा र दाजुभाईको अगाडी पनि फोन गर्दा पनि श्रीमान्ले त्यस्तै आग्रह गर्दा आफुले त्यो पुरा गर्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले त्यसबेला आमा मलाई बचाउनु भनेर आग्रह गर्दा पनि आफ्नो आग्रह नसुनेको बताएकी छन् । काठमाडौमा श्रीमान्ले एक महिना जागिर गर्दा पनि भिडियो कल गरेर आफ्नो अं ग देखाइदे भनेर दवाव समेत दिने गरेको पनि पुजाले बताएकी छन् ।
Prevप्रेमीले छोडेपछि रिस फेर्न कुकुरसंग विवाह गरेकी युवतीलाई पर्‍यो सोच्नै नसकिने बज्रपात !!
nextसावधान: के तपाईंको मोबाइलबाट थाहै नपाइ ब्यालेन्स सकिन्छ ? इन्टरनेट चलाउने सबैले अवश्य पढ्नुहोला !!